I-FreeOffice: ungaphrinta kanjani amaspredishithi amade ku-Calc | Kusuka kuLinux
I-LibreOffice: ungaphrinta kanjani amaspredishithi amade ku-Calc
Kade ngisebenzisa iLibreOffice kakhulu muva nje, futhi ngibonile ukuthi abaningi engisebenza nabo "bebenamathela" emibuzweni elula mayelana nokusebenzisa iLibreOffice. Mhlawumbe kungenxa yokuthi bafunde ukwenza konke ngekhanda kwa-MS Office futhi manje "balahlekile."
Kodwa-ke, ngithola ukuthi uchungechunge lwama-mini-tutorials wokuthi ungazenza kanjani ezinye izinto kuLibreOffice lungaba wusizo kakhulu emphakathini. Phakathi kwezinye izinto, ngoba ukusuka eMs Office uye eLibreOffice kungaba yisinyathelo sokuqala sokushiya iWindows kokuhle.
Kuleli thuba, ngethula ividiyo emfushane echaza ukuthi ungasishintsha kanjani isikali sespredishithi ukuze singene ekhasini elilodwa noma amaningi. Futhi, kusuka ku-yapa, ngikhombisa ukuthi ungayiphinda kanjani umugqa noma ikholomu ekhasini ngalinye.
Uma uthola ukuthi lolu hlobo lokufundisa luwusizo, ungakhohlwa ukushiya amazwana akho ngezansi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » I-LibreOffice: ungaphrinta kanjani amaspredishithi amade ku-Calc
gonzalezmd (# Bik'it Bolom # kusho
Umsebenzi omuhle. Jabulela
Phendula ku-gonzalezmd (# Bik'it Bolom #
Ngiyabonga! Bengicabanga ukuthi kuyithiphu enhle "yangempelasonto".
Iwusizo futhi ikhululekile.
umnikelo omuhle ngikulowo wokufudukela ku-msoffice uye eLibreoffice futhi lawa macebiso awela ezinweleni.
Kuhle! Ngiyajabula ukuthi iyasebenza futhi inentshisekelo! 😉
Ngisithandile isifundo, siwusizo kakhulu kimi. Qhubeka nomsebenzi omuhle.
Ngaphandle ... Uyazi ukuthi yimuphi umcimbi wesoftware ozoba seLima?
UWilliam Campoa kusho
Imenyu yamathiphu inhle kakhulu, isebenza kakhulu uma kufanele uphrinte ama-payroll abafundi ngefomethi enqunyiwe. imikhonzo futhi ulinde amanye amathiphu.
Phendula uWilliam Campoa
isifundo esihle kakhulu ngiyabonga!
Kufike kimi ngamapharele, iqiniso. Ngifuna okuningi!
Umfundisi omuhle kakhulu
Siyabonga ngokwabelana ngesenzeko.
Iqiniso liwukuthi, awungeke ube nombono ongcono. Njengoba uthatha isinqumo, ukusuka kuMsOffice kuya eLibreOfice kungaba yisinyathelo sokuqala soshintsho olukhulu.
Ngingumsebenzisi omkhulu weCalc futhi lokhu kuhle kimi.
Kulungile ... ukwanga okukhulu!
Umnikelo omuhle kakhulu 😀
Ngiyabonga futhi ngokubhala "okuhle kakhulu" kahle 🙂
I-athikili nokufundiswa kwevidiyo kuhle kakhulu.
Njengoba bengisebenzisa i-MS Office kusukela ku-Offce 97, iqiniso ukuthi iLibreOffice 97 ingilethela i-nostalgia.
Umfundisi omuhle kakhulu.
Ngokwesayensi yeLibreOffice 4.2. I-SIDEBAR isizolunga.
I-Eliotime uyayithanda i-LIbreOffice nge-Sidebar? .
Noma usacabanga ukuthi isichibi sokuhlanganisa ne-GNOME ne-KDE asanele?
Ngikusebenzise ngokushesha nje lapho iLibreOffice 4.1 iphuma, iqiniso ukuthi inembile kakhulu kunebha eseceleni ye-MS Office.
I-PS: IPeru ingelinye lalawo mazwe angabushiyanga ubuchwepheshe beMicrosoft okwamanje.
Bengiku-FACEBOOK naku-CLIX CNN.
Eqenjini elinabantu abavela eLatin America, ngiyafunga kuwe kodwa akukhona ngenxa yokukhuluma kabi ngabantu basePeru, kepha yibo abavikela kakhulu iMicrosoft, Office, Windows 8.
Asikwazanga ukwenza ihlaya, impela abanye basePeruvia bebeyogxumela ukuvikela i-MS $$$$$$$.
IMicrosoft kubukeka sengathi ibakhokhele.
Futhi bengicabanga ukuthi abantu baseChile bazonqena ngokwengeziwe ukufaka isoftware yamahhala.
Angikukholwa lokho, akusikho ukuthi abantu basePeru bakhathalele ukusebenzisa i-MS, kumane nje ukuthi singabantu abajwayelekile, futhi uma kusuka esikoleni sijwayele ukusebenzisa i-MS sizokusebenzisa size sife, impela kunabantu abahlala esinye isizathu noma esinye sishintshe umqondo wakho. Akunakwenzeka kepha kunzima.
Lokho kuyiqiniso, futhi kwaba ngaleyo ndlela lapho ngakujwayela ukusebenzisa i-Debian namanye amathuluzi wamahhala.
Ngokwako, sesize sajwayela nokudla ngisho i-warez.
kuhle kakhulu! kimi njengoba ngiphoqe…. Ngiqonde ukuthi, ngishumayele abanye babo ukuthi baye e-libreoffice, futhi kwesinye isikhathi bangibuza izinto ezinjalo, ngiyabonga kakhulu ngolwazi!
Yebo, uma useLima, uzohlushwa yiziteshi zeSiphambano ukushumayeza ukusetshenziswa kweLibreOffice.
shaya ikhwela kuphela kusho
Kuhle !!! Ngibonga kakhulu..
Sekuvele kufanele ngikhiphe njengama-trolls amathathu athi "masithembeke, ngakho-ke uma ihhovisi le-MS lingcono ngokuphindwe kayinkulungwane" -_-
I-BTW, Pablo omuhle, iyangisebenzela njengoba ungazi nakancane
Haha! Kuhle. Ngiyajabula ukuthi kuyasiza. Lokhu kungikhuthaza ukuthi ngenze okuningi okokufundisa kweLibreOffice ngokuzayo.
Ukususa ama-troll kuwumsebenzi onzima.
Ngokuphelele ngokuya ngochungechunge lwezifundo ezincane ze-LO / AOO Pablo, njengokuhlala kukhombisa kakhulu!
Umfundisi omuhle kakhulu, kuzongisiza kakhulu ekolishi.
Ukufundisa okuhle kakhulu, kuzongisiza kakhulu ekolishi.
Kuyamangaza-ke ukuthi ngibuye ngaphawula futhi ngoba eyedlule ibingashicilelwe.
Kumele ngivume ukuthi i-libreoffice iyathuthuka kakhulu nokuthi angilithandanga leli suite lehhovisi, ngingumvikeli kabusha we-MSOFFICE. Empeleni maqondana nokubukeka okusha ngithi kungaba yingozi kepha bangahlanganisa eminye imisebenzi ngaphakathi kwenkinobho, ngesitayela se-windows Explorer nesibukeli sayo. Kusele kimi ukuthi ngithi okuhle kubathuthukisi be-libreoffice, ngisaboshelwe ku-msoffice kepha hhayi njengakuqala, manje noma ngubani anganikeza isithupha ku-gnu / linux kanye nephakeji lalo lehhovisi.
Empeleni ngizobukeka ngithandekile ukuthi lolu hlelo lwanelisa kanjani kimi, ikakhulukazi ihhovisi le-libre, ihhovisi lidweba i-office cale ne-libre office cale impres, futhi ngingajabula kakhulu uma ungithumelela ibhukwana uma litholakala kuwe .
Isifundo esihle kakhulu. Bengilokhu ngisebenzisa i-GNU / Linux iminyaka kepha angikasebenzisi i-Libre Office eyikhulu. Lokhu kwenzelwa ukuhambisana ne-Microsoft Office. Kodwa-ke, muva nje bengilolonga futhi ngifunda ukuthi ngiyisebenzisa kanjani ngokuningiliziwe.
Kuhle lokho! Ngizozama ukuthumela ama-tutorials amaningi.
Isifundo sokusebenza ngemibhalo yeXML e-Libre Office singathokozelwa kakhulu, inketho yokwenza izifanekiso ngokuzenzakalelayo ilahlekile.
Ukuphawula kwami ​​kwenzelwa ukuthi kuzwakale ngokuzwakalayo ukuthi akungabazeki ukuthi iLibreOffice inikela ngemashi elindelekile emelene ne-MS Office, noma kunjalo, lapho sibukeza udaba lwamaphakheji we-office automation ahlukaniswe neqiniso lokuvumelanisa nokwabelana ngamafayela enhlanganweni, siyona.
Ngicabanga ukuthi i-LibreOffice kufanele iqinise inkinga yokuhambisana namafayela enziwe nguNkk Office ngoba umbuzo wokufuduka usuka komunye uya kwenye awukona nje ngenxa yokusebenza kwawo kepha kungenxa yokuthi abanye bazoqhubeka ku-MS Office bazishiye beyiphutha lehhovisi.
Ngiyavuma. Ngokufanayo, sibhekene nenkinga yenkukhu neqanda. Kuyiqiniso ukuthi ukuhambisana okukhulu kukhetha ukuchitha isikhathi kokusebenza okusha. Kodwa-ke, ukuze kuqinisekiswe ukuhambisana okungcono, KUNESIDINGO ukwengeza (okungenani) ukusebenza okufanayo kwe-MS OFFICE. Futhi ngalokho, sonke siyazi, i-LO isantula.
Shintsha i-Agent yomsebenzisi we-Chrome usebenzisa isishintshi somenzeli womsebenzisi
I-Slackware 14: Faka Amashayeli we-Broadcom BCM43XX